सिंगापुरमा देखियो मंकीपक्स भाइरस : त्रिभुवन विमानस्थलद्वारा सतर्क रहन आग्रह - Khabar Samridhhi
सिंगापुर । सिंगापुरमा मानिसमा मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सतर्क रहन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाइँदै गर्दा नेपालसँग सीधा हवाई सम्पर्क रहेको सिंगापुरमा पहिलोपटक यो भाइरस देखिएको हो । त्यसैले मन्त्रालयलाई चनाखो रहन जानकारी दिइएको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीले बताए ।
‘शुक्रबार मध्याह्न विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेक्सले हामीलाई खबर गरेको छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेक लालले भने । तर, उनले हवाई आवागमन बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।
हवाई आवागमन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन
डा. विवेक लाल
प्रमुख इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
जंगली बाँदर र पशुहरूमा देखिने मंकीपक्स अफ्रिकामा देखिएको थियो । जंगली जनावरको सम्पर्कमा रहने र त्यस्ता जनावरको मासु खाएको खण्डमा यो रोग लाग्छ । नाइजेरियाबाट सिंगापुर कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका एक व्यक्तिमा यो भाइरस रहेको पुष्टि भएको छ । त्यसपछि कुनै पनि अरू मानिसमा देखिएको छैन । विमानस्थलले गम्भीर चासो देखाएको छ, तर अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अवरुद्ध पार्नुपर्ने अवस्था छैन । हामी तयारीका साथ बसेका छौँ । विमानस्थलमा पनि स्वास्थ्यकर्मी तैनाथ छन् । थप सहयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष समन्वय गरिरहेका छौँ । अफ्रिका तथा अन्य देशबाट आएका मानिससँग हामी नियमित जानकारी लिइरहेका छौँ ।
दशजनामा एकको मृत्यु
मंकीपक्स भाइरस सन् १९५८ ताका अफ्रिकामा देखापरेको थियो । पछिल्लो समय यो विभिन्न देशमा फैलिएको छ । यसको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर न्यून छ । दशजना संक्रमित मानिसमध्ये एकको मृत्यु भएको छ । खासगरी बच्चमा बढी जोखिम देखिएको छ । संक्रमण भएको पाँचदेखि २१ दिनमा यसको लक्षण देखिन्छ । ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकान लग्ने, जाडो हुने, मासु दुख्ने, मुखमा घाउ आउने, अनुहार र शरीरभरि खटिरा आउने, सुरुमा रातो दाग र सो दाग उठेर पानी फोका आउने हुन्छ । पानीको फोकाबाट फोहोर पानी देखिन्छ र पछि सुक्खा घाउ बन्ने गर्छ । दुईदेखि चार हप्तासम्म लक्षण रहन सक्छ । यो रोग मान्छेबाट मान्छेमा त्यति सर्दैन । स्मलपक्सको खोप लगाएका व्यक्तिमा यो रोग लाग्दैन वा सामान्य मात्र हुन्छ ।